काठमाडौंमा ५१ देशका प्रहरी प्रमुख आउँदै
डिसेम्बर 15, 2016 डिसेम्बर 15, 2016 साइन्स इन्फोटेक0Comments अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन, इन्टरपोल, काठमाडौं, प्रहरी प्रमुख
काठमाडौं, मङ्सिर ३०, बिहिवार । काठमाडौंमा ५१ देशका प्रहरी प्रमुख आउँदै ! अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)को एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलन काठमाडौंमा हुने भएको छ। करिब २७ वर्षपछि एसिया प्रशान्त क्षेत्रका केही गृहमन्त्री र ५१ देशका प्रहरी प्रमुख नेपाल आउन लागेका हुन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले अपराध अनुसन्धान विभागलाई सम्मेलन तयारीको जिम्मा दिएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विज्ञानराज शर्माका अनुसार आगामी जनवरी १७ मा उनीहरू नेपाल आइपुग्नेछन्। सोही दिनबाट काठमाडौंमा सम्मेलन सुरु हुने एआईजी शर्माले जानकारी दिए।
तीन दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, मानव बेचबिखन, लागूऔषध तथा संगठित अपराध नियन्त्रणजस्ता गम्भीर विषयमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ। यस्तो सम्मेलन सन् १९८९ मा सम्पन्न भएको थियो।
← विज्ञानका कुरा – अनन्त ज्ञान कोच्ने मस्तिस्क चाहियो ?
चाणक्य नीतिका अनुसार पुरुषले सधैं गोप्य राख्नुपर्ने ४ कुराहरु →
काठमाडौंमा विज्ञान तथा प्रविधि सम्मेलन शुरु
मार्च 29, 2016 साइन्स इन्फोटेक
सामाजिक बहस – काठमाडौंमा चिनियाँ रेल पहिला कि भारतीय रेल पहिला ल्याउँदा ठिक होला ?
अप्रील 11, 2018 साइन्स इन्फोटेक 0
जामा चोकवाट काठमाडौँ हेर्दा
मार्च 29, 2018 साइन्स इन्फोटेक 0